व्हिस्की कसरी स्वाद गर्ने-उद्योग समाचार-गोआलङ रक्सी (समूह)
व्हिस्की कसरी स्वाद गर्ने
व्हिस्की पिउँदा पानी कसरी थप्ने? पानी थपेपछि व्हिस्कीलाई के हुन्छ?
व्हिस्की पिउँदा केही पानी थप्नु उपयोगी हुन्छ। जुन विकासकर्ताको प्रभाव जस्तै, पानीले व्हिस्कीलाई थप सुगन्ध छोड्न सक्छ, र व्हिस्कीको स्वाद पूर्णतया फरक हुनेछ। तपाइँलाई राम्रो सुझाव दिनुहोस्, तपाइँ अझै पनि पहिले शुद्ध पेय व्हिस्की, सुगन्ध गन्ध र अग्रिम स्वाद परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि पानी थप्नु अघि र पछि परिवर्तनहरू अवलोकन गर्न पानी थप्नुहोस्।
व्हिस्की पिउने बेलामा थप्न उत्तम पानी के हो?
यद्यपि हामी पानी पिउने व्हिस्की थप्न सिफारिस गर्छौं, सबै पानी उपयुक्त छैन। विशेष गरी प्राकृतिक पानी सिफारिस गरिएको छैन, किनभने क्लोरीनको गन्धले मुखौटा बनाउँछ वा व्हिस्कीको सुगन्ध पनि परिवर्तन गर्दछ। स्कटल्याण्डमा केही पानी एकदमै शुद्ध र सफा पेयको लागि व्हिस्कीमा थप्न धेरै उपयोगी छ। र केही डिस्टिलरीहरूले व्हिस्की बनाउन यो पानी प्रयोग गर्न। यद्यपि, यस प्रकारको राम्रो पानी पाउन गाह्रो छ र मूल्य धेरै उच्च छ। व्हिस्की चाख्दा, हामी सिधै सुपरमार्केटबाट पेय पानी किन्न सक्छौं। Gaolang Group-चीनको एकल माल्ट व्हिस्की पकाउने आधार GUMPFOG SPRING WATER एक राम्रो विकल्प हो।
चट्टानमा व्हिस्की कस्तो हुन्छ?
व्हिस्कीमा आइस क्यूबहरू थप्ने प्रभाव पानी थप्नको लागि पूर्ण रूपमा विपरीत छ। आइस क्यूबहरूले व्हिस्कीको सुगन्धलाई बन्द गर्नेछ। चलचित्रमा, उद्यमीहरू सधैं आफ्नो क्लासिक ककटेल गिलासमा दुई आइस क्यूबहरू थप्न चाहन्छन्, र त्यसपछि बिस्तारै व्हिस्की खन्याउन चाहन्छन्। तस्विर क्लासिक पोस्टरको रूपमा राम्रो देखिन्छ, तर प्रभाव वास्तवमा फ्रिजमा रक्सीको राम्रो बोतल राख्न र यसको अस्तित्व बिर्सनु जस्तै हो। बरफ थप्नको लागि व्हिस्की पिउनाले यसलाई चिसो र कम जलन पक्कै पनि दिन्छ, तर तापक्रम बढ्दा मात्र, व्हिस्की बिस्तारै यसको सबै अनौठो सुगन्धसहित फुल्नेछ।
यदि तपाई साँच्चै व्हिस्की पिउँदा आइस क्यूब थप्न चाहनुहुन्छ भने। पिउने बेला बर्फ थप्नको लागि तपाइँ मिश्रित व्हिस्की छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने मिश्रित व्हिस्की आइस क्यूबहरू भेट्न जन्मिएको व्हिस्की हो। Goalong समूह रोयल कार्लस्टन मिश्रित व्हिस्की उत्पादन एक राम्रो विकल्प हो। गहुँको नरम सुगन्ध र हल्का ओक ब्यारेलको सुगन्धको साथ, नरम र चिल्लो स्वादले यो चाइनिज ब्लेन्डेड व्हिस्कीलाई घरेलु बजारमा तातो बिक्री बनाउँदछ र यसलाई विश्वभर बेच्न सकिन्छ।
अघिल्लो: कुन अवसरमा कुन व्हिस्की पिउने?
अर्को: व्हिस्की ब्यारेल को ज्ञान